Gudniinku waa isticmaalka lahayn | Apg29
Gudniinka ma dhali kartaa in aad mar kale, laakiin waxa ay noqon kartaa Ciise Masiix.
Isbuucaan, waxaa la go'aamiyay kulanka xisbiga Dhexe in ay ka shaqeyn doonaan in la mamnuuco gudniinka wiilasha aan loo samayn sababo caafimaad.
Galatiya 6:15. Waayo, in Ciise Masiix gudniinta mana buuryadiisii ​​isticmaalka jirin, laakiin karo khalqi cusub.
Xarunta ayaa go'aansaday on shir xisbigiisa in ay doonayaan in la mamnuuco gudniinka wiilasha. hoggaanka xisbiga ayaa ka digay in loo arko doonaa sida xisbiga oo raba inay mamnuucaan Yuhuudda iyo Islam.
Laakiin sida ay samayso Kitaabka Quduuska ah, sidaas darteed gudniintuna waa isticmaalka lahayn. Waxaa aan waxba badbaadin karin. mid ka mid kaliya oo ku badbaadin karaan waa Ciise Masiix.
Xarunta go'aansaday in la mamnuuco
hoggaanka xisbiga aysan rabin in this, iyo hoggaamiyaha xisbiga Centerpartiet Annie Lööf dabadeedna sheegay in ay ka qoomameeyay go'aanka.
Hadda yimaado su'aasha ah, sidoo kale xisbiga Mudaraatka, kaas oo lagu kulmo in dhowr toddobaad. Waa Anna af Sillen iyo Maria Gilstig ka Sörmland ayaa gudbiyey mooshin, in la mamnuuco gudniinka wiilasha haddii ay tahay sababo caafimaad.
Dabcan, kooxaha Yuhuudda iyo Muslim murugoodo, taas oo aan fahmi karo, laakiin sida laga soo xigtay Kitaabka Quduuska ah ma aha badbaado gudniinka laakiin ku saabsan inaad tahay abuuridda cusub ee Masiixa ama ma.
Gudniinka ma badbaadiyay
Gudniinka ma dhali kartaa in aad mar kale, laakiin waxa ay noqon kartaa Ciise Masiix. Waxaa isaga waa waa in aad aqbasho haddii aad rabto si ay u badbaadaan.
Kitaabku waxa uu yidhi:
1Co 7:19. Gudniinka waxba, iyo buuryadiisii ​​macnaheedu ma aha wax, laakiin halkii ay u xajiya amarrada Ilaah.
Galatiya 5: 6-dii Waayo, in Ciise Masiix gudniinta midna wax buuryadiisii, laakiin rumaysadka ku shaqeeya jacayl.
Galatiya 5:11. Anna, walaalayaalow, haddii aan anigu weli gudniinta wax ku wacdiyo, sababta aan weli la ii silciyaa? Markaasaa waxaa u Denbi lahaa iskutallaabta iska.
Galatiya 6:12. All kuwa doonaya in ay leeyihiin muuqaal wanaagsan yihiin xagga jidhka, waxay idinku qasbaan in laydin gudo kaliya maxaa yeelay, way la silcin doonaa, waayo, iskutallaabta Masiixa aawadiis.
Kolosay 2:11. In isaga aad ayaa sidoo kale guday gudniin aan gacmo lagu sameeyey, laakiin gudniin Masiix, ka dibna ku xoorteen jidhka dembiga jidhka ee.
Waxaan u aragnaa in Kitaabka Quduuska ah si gaar ah ayaa sheegay in aadan la badbaadin karaa by gudniinka, laakiin badbaadada ku xiran tahay haddii aad qabto Ciise ama ma.
Laakiin waxaa jiray dadka in Kitaabka Quduuska ah oo doonayay in ay ku soo rogaan Mu'miniinta gudniinka. Waayo, waxay sheegtay in aan loo haddii kale badbaadin karo. Waxaad ka akhrisan kartaa in Falimaha Rasuullada 15: 1-2;
2. Markaasay kaceen khilaaf, oo Bawlos iyo Barnabas galay khilaaf aad u daran iyaga la. Waxay go'aansadeen in Bawlos iyo Barnabas iyo kuwo kale oo iyaga ka mid ah kor u safri lahaa in rasuulladii iyo waayeelladii Yeruusaalem ku saabsan arrintan dood badan.
Fiiro u yeelo in uu ku leeyahay "caadada Muuse" , ma aha "sharcigii Muuse oo ahaa ..." Ka dib Rasuullada tageen Yeruusaalem, waxayna go'aansadeen, wada jir ah ula Ruuxa Quduuska ah:
Falimaha Rasuullada 15: 28-29. Waayo, Ruuxa Quduuska ah iyo waxaan go'aansanay inaanan idin saarin culaab ka weyn marka laga reebo taasi lagama maarmaan:
29. Taasi waa in aad ka fogaataan waxa sanamyada loo sadqeeyo, iyo dhiigga, iyo hilibka xoolaha la ceejiyo, iyo sinada. Haddii aad si taxadar leh aad la tashato for this, waxaa aad xaq samaynaya. Madaxweynaha oo sagootiyey.
Markaa waxaan arkaynaa in ay tahay amma in waa in la gudaa si ay u badbaadaan. Sida kaliya si ay u badbaadaan waa in ay aqbalaan Ciise Masiix oo ay rumaysan isaga.
Dooda waa in aan la iska indho tiri
Laakiin doodda siyaasadeed ee Sweden ma laga yaabaa in ay sidaas aan dhib lahayn. Waxaa laga yaabaa in waqtiga soo socda ay u tagaan dhanka ah badbaadada dhabta ah wax muhiim ah, sida in aad ma rumaysan karo in Ciise, ama in aad carruur in ay aaminsan yihiin in Ciise ma bari karaan, markaas waxa uu noqonayaa mid si dhab ah khatar ah.
Ha noo barya, waayo Sweden iyo dadkeeda. Ha noo barya, waayo siyaasiyiinta si ay u go'aan uma gaadho kuwa u taga Ciise iyo Kitaabka Quduuska ah ka gees ah. Ha na baryayaa in Ilaah wuxuu soo diri doonaa inuu shaqaalayaal beertiisa u soo galay sida markhaatiga iyo aaso oo ku saabsan Ciise si ay dadku ay awoodaan in ay soo dhoweeyaan isagii si ay u badbaadi noqon doonaa.